Gbanwee Search Search na Safari na agụ owuru | Martech Zone
Wednesday, June 17, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
M na-eji Safari 4 maka otu izu ma ọ bụ karịa. Ọ bụ naanị taa ka m ghọtara na enweghị m ike ịgbanwe igwe nchọta ndabara n'ime Safari. Naa!
Obi dị m ụtọ, enwere Nkọwa, ngwa na-enye gị ohere ijikwa engines ọchụchọ gị na Safari. Nwere ike ịgbakwunye, wepu, dezie ma hazie engines ọchụchọ nke ị họọrọ. Ọ dị oke mfe ịwụnye ma hazie.
Nanị wụnye ngwa mgbakwunye, bidogharịa Safari, wee mepee Safari> Mmasị. Na taabụ ikpeazụ ị ga-ahụ ntọala maka Glims.
Bing adịghị na ndepụta ndabara, mana enwere m ike itinye ya na nkeji ole na ole site na ntọala ụzọ na-esonụ:
Ebe ọ bụ na ọtụtụ sistemụ njikwa ọdịnaya na-abịa na ike ime ime, ị nwekwara ike ịgbakwunye saịtị nke gị. Achọpụtara m na m na-enyocha saịtị nke m oge niile maka ihe ochie m dere. Nke bụ eziokwu bụ na blọọgụ m nwere ebe nchekwa ka mma karịa m!
Nke a bụ ntọala nchọta nke blọọgụ m (na-agbanwe agbanwe n'ofe nrụnye WordPress):
Ọ bụrụ n ’iwe iwe gị maka nchọta ndabara nke Safari ka akpọchiri ya na Google, wụnye Glims. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgafe iyi ma kpasuo iwe nke Steve Jobs, tọọ igwe nchọta ndabere gị na Bing. [Ọchị ọjọọ]
Enwere m obi ụtọ na mwepụta ọhụụ nke Safari na ịnụ ụtọ Bing (ọkachasị usoro ihe osise na vidiyo). Nke a eyiri ha abụọ n'ime nnukwu ngwugwu!
Daalụ maka post a, nke a bụ kpọmkwem ihe m chọrọ. Ọ bụghị na m chọrọ anataghị ikike Steve Jobs, mana m kpọrọ nnukwu anụ ọhịa google asị ma achọrọ m ịhọrọ mgbe m na-eji safari. Daalụ ọzọ.
Nhọrọ ndị ọzọ maka ịgbanwe nchọta ndabere na igwe windo?
Ndewo ndanda - emere m nyocha ọ ga - egosi na naanị nhọrọ dị na Google ma ọ bụ Yahoo! n'ime mmasị Safari. Olileanya na onye ga-anataghị ikike ihe ngwọta n'oge na-adịghị anya!
Jul 9, 2009 na 4:14 PM
dị mwute ikwu na ọ naghị arụ ọrụ niile na Safari 4.0.x, naanị nhọrọ apụl na-enye gị bụ Google na Yahoo
Iji 3.2.3 nwere ike iji nyocha ọ bụla ịchọrọ tinye Glims ọ bụghị
Jul 9, 2009 na 4:30 PM
N'ezie, nke ahụ abụghị ikpe ma ọlị. M na-agba Safari 4 na Glims n’enweghị nsogbu ọ bụla na agụ agụ. Zitere m na Verizon Ikuku Blackberry
Jul 20, 2009 na 5:35 PM
Ọ bụ ezie na nke a na-eme aghụghọ, ọ bụ ihe zuru oke maka ndị anyị chọrọ ịgbanwe igwe nchọta ihe. Ekwenyesiri m ike na Glims bụ ezigbo ọrụ, mana ọ na-ewepụ m ntakịrị oge m bidogharịa Safari ma chọpụta na agbakwunyere atụmatụ karịa ka m nwere ike ịgụ.
M na-agbalị Inquistor ma nke a anaghị ekwe ka m tinye Bing, dị nnọọ Yahoo na Google… ọ bụ ezie na ọ na-akawanye daisi ihe maka ikwe nhọrọ nke metụtara nanị akụkụ ụfọdụ nsụgharị. Have maghị etu o si agbakasị gị ịnwale ma chọta nsonaazụ Google dabara adaba mgbe ị bi na mba na-abụghị US yana iji asụsụ ndabara gị tinye aka na ihe ejiri na Google.com ma ọ bụ Google gị.
Sep 20, 2009 na 12:29 PM
ọ dị ọhụrụ na mac, enwere m ikwu - enwere m mgbanwe nke kachasị mma. Mgbe m kwusịrị nke ahụ - ịghara ikwe ka ndị ọrụ nwee ike ịgbanwe nyocha nhọrọ nke masịrị ha - ma ọ bụ opekata mpe - ọbụlagodi ọnọdụ ebe ha na-achọ njinchọ ihe bụ nnukwu nlekọta. O doro anya na ọ dịkwa mfe idozi - na-enweghị mkpa maka ndị mmadụ ibudata mgbakwunye naanị iji nweta njirimara nke ga-adịrịrị ebe ahụ?
Sep 29, 2009 na 10:31 PM
Ileba anya? Ana m eche na ọ bụ nkwekọrịta na Google. Ekwenyere m na Nate… Ọ ga-amasị m ka ihe na-edozi nsogbu a - glims dị oke njọ, na enweghị m ike ịchọta ụzọ iji gbanye ihe ọ bụla.
Ọkt 1, 2009 na 2:16 AM
Daalụ!!!! ihe m kwuru n'elu adịghịzi emetụta. Achọrọ m iji kọmputa mechie kọmputa ahụ wee gosipụta ọrụ ntanetị. mma ngwa. alexandra.
Nov 15, 2009 na 2:40 AM
ị nwere ike ịgbanwe igwe nchọta ihe site na ị gbanwee faịlụ ndị a na-ebute site na njedebe site na iji vi.